Ndị na-ege ntị na Community: You Maara Ihe Dị Iche? | Martech Zone
Anyị na Allison Aldridge-Saur nke Chickasaw Nation nwere mkparịta ụka dị ịtụnanya na Fraịde na m ga-agba gị ume ka ị gee ya ntị. Allison nọ na-arụ ọrụ na-adọrọ mmasị dị ka akụkụ nke onyinye Digital Vision, na-ede usoro na Ihe omumu nke ndi America maka ulo ndi obodo.
Na akụkụ abụọ nke usoro ya, Allison na-atụle Ndị na-ege ntị na obodo. Nke a metụtara m dị ka otu n'ime ihe dị mkpa nke usoro ahụ dum. Amaghị m na ọtụtụ ndị na-ere ahịa matara na enwere ọdịiche dị iche n'etiti ndị na-ege ntị na obodo. Ọbụna ebe a na Martech, anyị na-arụ ọrụ dị egwu nke iwulite nnukwu ndị na-ege ntị… mana anyị emepebeghị atụmatụ iji zụlite obodo.
Allison na-atụle ọdịiche dị n'etiti na-ewuli nd i na-ege gi nt i aka - ige ntị, itinye aka, ọdịnaya dị mkpa, isi iguzosi ike n'ihe, ịme egwuregwu, inye onyinye, inye onyinye na izi ozi. Mayfọdụ nwere ike ịrụ ụka na ndị a bụ azum na-ewu obodo… mana enwere otu ajụjụ ga-aza ma ị nwere otu ma ọ bụ nke ọzọ. Ndị obodo ọ ga-aga n'ihu na-enweghị gị, na-enweghị ọdịnaya gị, na-enweghị mkpali gị, ma ọ bụ na-enweghị uru niile ị na-eweta ha? Ọ bụrụ na azịza ya bụ NO (nke ọ nwere ike ịbụ), ị nwere ndị na-ege ntị.
Iwulite obodo gi bụ a dị nnọọ iche atụmatụ. Ngwa ihe eji eme obodo bụ aha otu, ihe omume na ndị mmadụ n'otu n'otu, n'iji igwe okwu nyocha, inwe akara nke gị, mepee na-akọrọ akụkọ, inwe usoro bara uru, ememe, nkwenye na nkwukọrịta. Obodo dị iche iche na-ebi karịa onye ndu, ikpo okwu, ma ọ bụ ngwaahịa (chee echiche Trekkies). N'ezie, Allison kwuru ihe dị ịtụnanya mgbe anyị na - agwa ya okwu… onye na - akwado akara na obodo nwere ike ịdịkarị ogologo oge karịa otu ndị ahịa!
Nke ahụ apụtaghị na ịnwe naanị ndị na-ege ntị bụ ihe ọjọọ… anyị nwere nnukwu ndị na-ege anyị ntị nke ukwuu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na blọọgụ ahụ pụọ n'anya echi, ana m atụ ụjọ na ndị na-ege ntị ga-emekwa, oke! Ọ bụrụ na anyị nwere olile anya iwulite echiche na-adịgide adịgide, anyị ga-arụ ọrụ iji mepee obodo.
Ezigbo ihe atụ nke a bụ ịtụle nyocha ngwaahịa ndị ọzọ na Ndepụta Angie (onye ahịa anyị). Ndị otu nọ na Angie's List anaghị akọwa nyocha, nye ha nyocha na-enweghị aha… ma ha na-arụ ọrụ pụrụ iche na mgbasa ozi n'etiti azụmahịa na ndị ahịa iji hụ na a na-emeso akụkụ abụọ ahụ ihe n'ụzọ ziri ezi. Ihe si na ya pụta bụ obodo raara onwe ya nye nke na-ekerịta ọtụtụ narị nyocha miri emi banyere azụmahịa ha na-emekọrịta.
Mgbe m debanyere aha m maka ọrụ ahụ, echere m na m ga-ele ihe dịka Yelp ebe edepụtara azụmahịa ma nwee akwụkwọ nyocha iri na abụọ nwere ahịrịokwu ma ọ bụ abụọ n'okpuru ha. Kama nke ahụ, obere nchọgharị maka ndị ọrụ pọmpụ na mpaghara m chọpụtara ọtụtụ narị ndị ọrụ pọmpụ nwere ọtụtụ puku nyocha miri emi. Ọbụna m nwere ike warara ya plumber nwere nnukwu akara maka itinye igwe eji ekpo ọkụ mmiri. Ihe si na ya pụta bụ na enwetara m nnukwu igwe na-ekpo ọkụ mmiri na nnukwu ego ma enweghị m nchegbu maka ma m na-agbaji. N'otu azụmahịa, echekwara m ego afọ niile nke ndị òtù.
Ọ bụrụ na, site na ụfọdụ ebumnuche na-enweghị isi, Ndepụta Angie kpebiri imechi ụzọ ya, enweghị m obi abụọ ọ bụla na obodo ha mepụtara ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị ịtụnanya ha na-arụ n'ụzọ ziri ezi na ịkọwapụta nsonaazụ azụmahịa. Yelp na Google nwere ike inwe nnukwu ndị mmadụ… mana ndepụta Angie na-ewulite obodo. Ọ bụ nnukwu ihe dị iche.
Kedu ihe ị na-ewu?
Tags: ndị na-ege ntịụlọ ndị na-ege ntịchickasawMba Chickasawobodoụlọ obodoelekọta mmadụ mediausoro mgbasa ozi mmekọrịta
Ekwenyesiri m ike na m na-ewu obodo. Achọrọ m ihe na-eto eto n'agbanyeghị na anọghị m ebe a. Nke a na-egosi na emeela m ihe kwesịrị ịga n'ihu.
Aha ya bụ Laura Briere
Sep 10, 2012 na 12:38 PM
Ya mere eziokwu - ikwesiri ime ka ndi mmadu nwee obi uto dika obodo gi. Nke a bụ n'ezie otu ọ si aga mgbe ị na-agba ụlọ ọrụ gị. Ọ bụrụ na m nwere ike ịnọ ọfịs maka otu izu ma ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na-enweghị m, amaara m na emeela m ihe ziri ezi.